Xildhibaan dilal ku eedeesan oo xarun baarlamaan laga dhax xiray (Daawo Sawirada) | Hobyo Media Online
Xildhibaan dilal ku eedeesan oo xarun baarlamaan laga dhax xiray (Daawo Sawirada)
Jan 31, 2019 - jawaab
Xildhibaan katirsan Aqalka sare ee Baarlamaanka dalka Ruushka ayaa xasaanada laga qaaday kadibna xabsiga la dhigay, kadib markii lagu eedeeyay in uu ku lug lahaa dil loo geestay labo ruux.
Rauf Arashukov oo sanadkii 2016-kii Xildhibaan noqday ayaamaanta la xiray xili uu ku jiray xarunta Aqalka sare ee Baarlamaanka dowlada Ruushka, waxaana gudaha xarunta ugu tagay ciidano gaar ah kuwaa oo isaga oo jeebeesan gaari ku ritay.
Rauf Arashukov ayaa lagu eedeeyay in uu ku lug lahaa dil labo qof oo caan ah sanadkii 2010-kii loogu geestay magaalada Cherkessk, oo ah caasimadda gobolka Karachay-Cherkessia ee dalka Ruushka.
Xildhibaankan la xiray oo 32-sano jir ahaa ayaa aqalka sare ee Ruushka ku matalayay maamul goboleedka Karachay-Cherkessia, waxaa lagu eedeenayaa in uu qeyb ka ahaa Qandaraas lagu dilay labo ruux oo caan ka ahaa Karachay-Cherkessia.
Baarayaasha ayaa ku tuhmaya in Xildhibaanka ku lug lahaa dilka Aslan Zhukov, oo ahaa hoggaamiyaha dhaqdhaqaaq dhallinyaro ah oo lagu magacaabo Adyge-Khase iyo sidoo kale Fral Shebkhuzov, oo la taliye u ahaa madaxweynaha gobolka Karachay-Cherkessia.
Mr Arashukov ayaa sidoo kale lala xiriirinayaa dambiyo kuwaas ka duwan oo la sheegay inuu geystay, sida ay boggooda internet-ka ku qoreen guddiga baaritaannada dambiyada ee dalka Ruushka.